-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး ၂/၂၀၂၁ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း… – PVTV Myanmar
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး ၂/၂၀၂၁ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း…
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး ၂/၂၀၂၁ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
-အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ သံတမန်ရေးရာကိစ္စများ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲပြုလုပ်ခြင်း
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေး အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကြေညာချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁ ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
-အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကင်နဲ့ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အက်စ် ဂျီရှန်ကာတို့နှစ်ဦး ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ အမေရိကန်-အိန္ဒိယ ဆက်ဆံရေးရဲ့ အရေးပါမှုအပေါ် ထပ်လောင်း အတည်ပြုတဲ့သတင်း
စတဲ့ သတင်းတွေအပါအဝင် ယနေ့ညနေပိုင်း PVTV သတင်းတွေ ကိုတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 7.7K Share – 800
2021-04-20 at 9:13 PM
2021-04-20 at 9:15 PM
NUG အပေါ် ပြတ်သားစွာထောက်ခံပါသည်။
Myo KO Kø says:
2021-04-20 at 9:17 PM
2021-04-20 at 9:19 PM
อ๊างเเฆ ออออ says:
မမ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္လဲ စဥ္းစားေပးၾကပါ အရနည္းေပမဲ့ ေပးဆပ္မႈႀကီးမားသူေတြပါ ။
Chigo Guapo says:
2021-04-20 at 9:28 PM
ကာကွယ်​ရေး ကိုပဲ အဓိက ​မျှော်လင့်ပါတယ်
နယ်အသီးသီးက လူငယ်တွေကို လိုက်
2021-04-20 at 9:33 PM
2021-04-20 at 9:35 PM
NUG. Our government.
Yan Shin Thu says:
2021-04-20 at 9:36 PM
Thein Theintan says:
2021-04-20 at 9:51 PM
2021-04-20 at 10:11 PM
2021-04-20 at 10:29 PM
လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ရက်စက်ကြမ်ကြုတ်စွာစစ်ရာဇဝတ်မှုများစွားကျူးလွန်နေတဲ့ အာဏာလုစစ်ကောင်စီက်ို အမြန်ဆုံး အရေးယူနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်ပါလို့ လေးစားစွာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
NUG မှ လုပ်ဆောင်သမျှ အောင်မြင်ပြီး ကူညီမည့် နိုင်ငံများပေါများပါစေ။
Cho Wint says:
2021-04-20 at 10:42 PM
2021-04-20 at 10:43 PM
Nyi Nyi Tay Za says:
ကာကွယ်ရေးက အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ် မကြာခင်ပေါ်လာတော့မယ် ပြည့်သူ့ကာကွယ်ရေးဆိုတာကို အရမ်းမျှော်လင့်တယ်…. ခံတပ်ဆောက်အရင်လို ရရလက်နက်နဲ့ ခုခံဆိုရင်တော့ 😞 သေနေဉီးမှာပဲ …. ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ရေးအစီအမံဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ်….
Nyi Thit says:
2021-04-21 at 11:01 AM
24 hr မှာ 13hr နေ့တစ်ဝက်ကျော် ဖြတ်နေတာ
အာလုံး Speak out လုပ်ကြပါ
စံ စံ says:
2021-04-21 at 12:04 PM
Ma May Zaw Oo says:
Snoopy Moe says:
2021-04-21 at 5:30 PM
2021-04-22 at 7:06 AM